Ziziphi iingenelo umatshini omtsha Chili stem ukusika - China Lu Lu Agricultural Equipment
Chili machine stem ukusika
Chili Large machine stem ukusika
Chili Medium machine stem ukusika
Chili Small machine stem ukusika
Land ez Series
Chili ilitye ukususa umatshini
Chili machine ukusika
Chili Umbala Ukuhlela Machine
Patent for kwasungulwa
Ziziphi iingenelo Chili omtsha umatshini stem ukusika
Ziziphi iingenelo ye okwetshilisi umatshini omtsha isiqu ukusika? Chili Umatshini stem ukusika yinxalenye ebalulekileyo yemveliso yezolimo kwezinye iindawo. Kuyinto imfuneko engaphephekiyo yophuhliso zezolimo ukuyila Chili stem umatshini ukusika efanelekileyo nesebenzayo. A epheleleyo buyisela ubhalo kwisixhobo siquka iindawo ezintlanu: inkqubo zisitya, inkqubo yokuhanjiswa, inkqubo kwexesha, kunye nenkqubo ukothula.
Yintoni na ithemba Chili stem yokusika umatshini? Lo mbuzo akanyanzelekanga ukuba iphendulwe kungxama. Ngenxa yokuba imveliso kanye nobomi, akukho nzima ukufumana ingqalelo encinane ukubona. Kwiminyaka yakutshanje, ubonelelo lulonke kunye nemfuno iimveliso Chili liye landa iminyaka ngeminyaka ngokuhamba kwexesha. Okwangoku, kuphela e Qingdao, kukho iilali ezininzi needolophu abanenxaxheba nemveliso nokuqhutywa iimveliso Chili ngomlinganiselo omkhulu. Ngenxa yoko, inani basenokuba ngabaxhamli beenkonzo ze Chili Umatshini stem isithole yayisathe emangalisayo. Ukongeza, eli lizwe liphela, Hunan, Sichuan kunye namanye amaphondo ngo-China nayo abavelisi ezinkulu amaphondo Chili. Yaye kwezinye zezi nkalo, Umsebenzi iimveliso Chili nangoku kwi-nqanaba handwork, ngoko xa kukho umatshini Chili ukubeka oomatshini Chili kwi emarikeni, oko kuya entla kwamkelwa inani elikhulu abahlobo Sasungulwa. Ke imveliso enjalo ngokuqinisekileyo kuya kukunceda ukuba ukuphucula ukusebenza kwemveliso Chili.
Kunye nophuhliso oluqhubekekayo zobugcisa, kuba zonke iintlobo zoomatshini lula ebomini, ke iyaqala ukuba kuvela emarikeni. Chili stem ukusika umatshini ungomnye wabo. Indlela yokusingatha iintlobo ezinjalo Chili? Mhlawumbi kuba yimfuneko ukuba bakhethe imisebenzi enjalo kunye nemigaqo.
Ubume kunye nokusebenza:
iimpawu 1.Performance: esi sixhobo isetyenziswa ikakhulu ngenxa nobushushu kuchetywa Chili, izixhobo ukusebenza yokusika phezulu, umonakalo Chili ephantsi, ukusebenza phezulu, ukuqiqhelanisa nokongezelela iintlobo ezahlukeneyo kunye nemilo Chili (Kufuneka kwenziwa), ukusebenza umatshini elilodwa ngaphezu amaxesha 5 yemarike imveliso eziqhelekileyo, ukusebenza kumatshini liphela lifikelele kwinqanaba ephambili ngamazwe. Le mveliso, zincediswa yi izixhobo oluncediswayo ezifana ukususa ukungcola eveza, zingenza indlela yokusebenza oluzenzekelayo umatshini yonke badlale indima ebalulekileyo. Lo izixhobo ebalulekileyo ukuhluzwa inani elikhulu iimveliso zezolimo. It buyisela inani elikhulu lokuSetyenziswa kwaMandla oLuntu, ukugcina iindleko nokusebenza, kwaye iphucule kakhulu ukwanela yokusebenza.
2. Main Umgaqo esebenza: kwinkqubo sefu igubu qikeka, Novunayo imela ngaphandle kodonga cylinder yokugalela ukuvelisa kamatshini umqheba Chili ugqithayo kuwo sefu umngxuma Ihenjisi amandla, ukuphumeza injongo ngokususa isiphatho Chili.
ixesha Post: Sep-10-2018
Nika Us A Memezani
Fumana Updates Email
Idilesi: Jiaozhou City, Qingdao City, Shandong, Jiaolai Industrial Park
Xa ukusika Chili entsha, izandla zethu ...
Yintoni intsingiselo lentengiso Chili ...
Zeziphi iingongoma ukuze ingqalelo kule ...
Ziziphi iingenelo stem Chili entsha ...
Ziziphi iingenelo okwetshilisi stem cu ...
I Ford logo kunye negama Bronco impahla ye Ford Motor Company. Classic Ford Broncos sinxulumana ne Ford Motor Company.